Ergooyin ka baxay shirka dhismaha Baarlamaanka Jubba oo gaaray Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ergooyin ka baxay shirka dhismaha Baarlamaanka Jubba oo gaaray Muqdisho
By MAREEG	 Last updated Apr 11, 2015
Waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho Wafdi uu Hoggaaminayo Ugaaska Beesha Sade Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi Ugaas Xirsi oo ay wehliyaan odayaal dhaqan iyo Siyaasiyiin caan oo ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Ergooyinkan ayaa sheegay inay isaga soo baxeen shirka dhismaha Baarlamaanka Jubba ee ka socday Kismaayo, isla markaana ay u dulqaadan waayeen dhibaatooyinka ka taagan deegaanka iyo in Maamulka uu hogaamiyo Axmed Madoobe uu dhamaan maroorsaday kuraasta Xildhibaanada.
Ugaaska iyo wafdiga la socda oo ay soo dhoweeyeen Xildhibaano, siyaasiyiin iyo haween ayaa shir jaraa’id oo uu Ugaasku ku qabtay garoonka diyaaradaha Aadan cadde kaga hadlay sababihii uu isaga soo baxay shirka, isla markaana ay Beesha Sade ay gebi ahaanba ka baxday shirka oo aysan wax ka qeybsan Baarlamaanka Jubbaland.
“Tan iyo markii Axmed Madoobe qabsaday Magaalada 2012, Shacabka waxay noqdeen Bartilmaameedka 1-aad ee Maleeshiyada Raas Kambooni, waxana magaalada lagu laayay dad kor u dhaafay dhowr boqol, boobka iyo kufsugana waa wax wali ka socda Kismaayo arimahaasin waxay kasoo horjeedaan wixii aan ku fekeraynay ee ahaa shacabka gobollada Jubbba in ay helaan Nabad iyo Horumar. waxaana ay Magaalada ay noqotay Kawaan Rayidka lagu xasuuqo.Horey ayaan Maamulka wax uga dhisnay ujeedkuna ma ahayn in dadka lagu dhibaateeyo ee waxay ahayd dadka Jubbooyinka in ay helaan Caddaalad iyo Sinaan, isla markaana ay wax wada qeyb sadaan”ayu yiri Ugaas Maxamed oo intaas ku daray.
“Waxaa magaalada Kismaayo caado ka noqotay wax aan dalka Soomaaliyeed wali laga arag taas oo ah in dadka lagu gubo Koronto, isla markaana inta dadka la laayo lasoo dhigo Xeebta waa arrin laga naxo oo argagax leh oo u baahan in beesha Caalamka ku baraarugaan waxna ka qabtaan. Dadka shacabka ah ayaa xoog looga qaadaa meelaha ay dagan yihiin, iyadoo la dajinayo dad la doonayo in lagu beero deegaanka Kismaayo.
Sidoo kale, Waxaa uu sheegay in shacabka beeshiisa laga dhigtay bartilmaameed gaar ah iyadoo dadka la dilay ay ugu danbeeyeen Ciidamadii laga soo raray Goobweyn.
“Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya Ergayga Xog-hayaha Guud ee QM, Uruur Goboleedka IGAD iyo gud ahaan Beesha Caalamka in ay ka digtoonaadaan wax yaabaha beenta ah ee ay ku magacaabayaan Baarlamaan Axmed Madoobe iyo Kooxdiisu soo qorteen taas oo haba yaraatee beelaha Soomaaliya aysan isku waafaqin aysan qabsana”ayuu hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi.
Wasiir Hadliye oo la shiray xawaaladihii Kenya xirtay